Adeegyada Badbaadadda carruurta iyo arrimaha bulshada - Lastensuojelu.info
Qiimeynta baahida adeega iyo billaabashada macmiilnimo ee badbaadadda carruurta
Billaabashada macmiilnimo ee badbaadadda carruurta ama daryeelka arrimaha bulsha inta badan, waa iyadoo waalidka ama ilmuhu la soo xiriiro isla markaana weydiista caawin. Sidoo kale macmiilnimada wey ku billaaban kartaa tusaale aqoonyahanada iskuulka iyo xannaanooyinka iyagoo la kaashanaya waalidka la soo xiriira shaqaalaha arrimaha bulshada, si loogu sameeyo qiimeyn baahida kaalmo ee ilmaha iyo waalidka.
Arrinka sidoo kale waa ku billaaban karaa soo wargelinta badbaadadda crruurta. Soo wargelinta badbaadadda carruurta wuu sameyn karaa ruux walba, kaasoo wallaac ka qaba ladnaansha carruurta wuxuuna soo wargelin karaa isagoon sheegin magaciisa.
Inta badan shaqaalaha ka shaqeeya qoysaska iyo carruuraha waxaa ku waajib ah iney sameeyaan wargelinta badbaadadda carruurta. Tusaale shaqaalaha iskuullada iyo xannaanooyinka waa iney sameeyaan wargelinta badbaadadda carruurta, haddii ay tuhmaan, in ilmihii u baahan yahay caawin. Inta badan aqoonyahanadu waxay marka hore la sheekeystaan qoyska. Sidoo kale booliiska wuu sameyn karaa wargelinta badbaadadda carruurta, haddii ilmaha aan qaangaarin uu sameeyo faldenbi, isticmaalo muqaadaraad ama ay jirto xaalad dagaal oo qoyska.
Maxay yihihiin sababaha aad ugu baahan karto kaalmo?
Xaalada qoyska oo ku timi isbedel weyn, taasoo saameyn ku yeelatey guud ahaan nolosha.
Waalidkii oo daaley, dhibaato nafsiyan, qalbi jab ama jirooyin
Waalidka oo badi ama inta badan isticmaala muqaadaraad
Qoyska oo dagaalkoodu badan yahay
Ilmihii ama da’yartii, oo sameynaya waxyaabo khatar ku ah isaga ama waxyeelo; isagoo si xad dhaaf ah u isticmaalaya mukhaadaraad, sameyna faldenbi ama dhigan waayey iskuulka.
Ilmihii inuu qabo dhibaato nafsiyan ah
Ilmihii oo masuuliyad ka weyn oo nolol maalmeedka reerka loo dhiibey tusaale waalidkii oo xanuunsan darteed.
Maxaa kaaga imaan kara la soo xiriirista ama wargelinta?
Shaqaalaha daryeelka arrimaha bulshada ayaa si foojigan u qiimeynaya wargelin iyo la soo xiriiris kastaba inta badana markaa kadib qiimeyn ku sameeysa xaalada qoyska iyo carruurtii, si ay ahaataba xaaladu qiimeynta wey ahaan hadba siduu qabo daryeelka bulshada qiimeyn baahida adeega ama xaqiijin baahi badbaadadda carruurta
Xaqiijintaasi waxay keeni kartaa iney bilaabato macmiilnimada daryeelka arrimaha bulshada ama badbaadadda carruurta.
Haddii ilmuhu iyo qoyskuba xaaladoodu tahay mid kaalmo iyo caawin uga baahan badbaadadda carruurta, waxaa markaa ilmihii u billaabanaya macmiilnimada badbaadadda carruurta Markaasna waxaa loo magacaabaa arrimahiisa shaqaale arrimaha bulshada u gaara. Haddii qiimeynta baahida adeega ama xaqiijinta baahida badbaadadda carruurta ay ku timaado wallaac shaqaalaha xaalada ilmaha, macmiilnimada badbaadadda carruurta wey ku billaaban kartaa xaaladaas, haddii ay markaas ilmihii iyo waalidkiiba u arag ineysan jirin wax muhiim ah.
Haddii carruurtii iyo qoyskuba u baahan yihiin, waxaa loo sameeyaa qorshaha macmiilnimo
Had iyo goor qorsheynta macmiilka sameynteeda waxaa lala sameeyaa carruurta iyo qoyska. Qorsheyntana waa la cusbooneysiiya haddii loo baahdo ugu yaraan mar sanadkii. Cusbooneysiinta waxaa la eegaa wixii lagu heshiiyey, shaqada la qabteyse ma aheyd mid caawisey.